10 ဥရောပရှိ အံ့ဖွယ်မှတ်တိုင်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ဥရောပရှိ အံ့ဖွယ်မှတ်တိုင်များ
ရှုခင်းများ, လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောရွာများ, ရဲတိုက်များကို သိမ်းဆည်းထားသည်။, နှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သောအိမ်များ, ဤ 10 ဥရောပရှိ အံ့မခန်းရပ်နားမှုများသည် သင်၏နေထိုင်မှုကို သက်တမ်းတိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။, ဒါပေမယ့် သူတို့လည်ပတ်ဖို့ လုံးဝထိုက်တန်ပါတယ်။.
1. ဥရောပရှိ အံ့ဖွယ်မှတ်တိုင်များ: Rakotzbrucke, ဂျာမနီ
Saxony ရှိ ပန်းခြံငယ်တစ်ခုတွင် ပုန်းကွယ်နေခဲ့သည်။, မာရ်နတ်တံတား, Rakotzbrucke ဟုလည်းလူသိများသည်။, Berlin မှ စိန်ခေါ်သော ခရီးစဉ် သည် လုံးဝထိုက်တန်ပါသည်။. ခရုပတ်ကျောက်ဆောင်တံတားကနေ 1860, ၎င်း၏ထူးခြားသောပုံသဏ္ဍာန်နှင့် တည်ဆောက်မှုကြောင့် ခရီးသွားများကို စိတ်ဝင်တစားနှင့် စွဲဆောင်နိုင်သော မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင် ချွန်ထက်သော မြှပ်တံများနှင့် အလွန်လိမ်လည်သောတံတား, မာရ်နတ်ကိုယ်တိုင် ဖန်ဆင်းထားနိုင်ပုံပါပဲ။, ဒါပေမယ့် တကယ်တော့ အားလုံးက လူလုပ်တယ်။.
ထို့အပြင်, ရှေးခေတ်က နတ်ဆိုးအား ပူဇော်သက္ကာအဖြစ် ဤတံတားကို လူတို့သည် တည်ဆောက်ကြသည်ဟု ပုံပြင်များကဆိုသည်။, ဒါပေမယ့် ဒီနေ့တော့ မှော်ဆန်တဲ့ နေရာတစ်ခုပဲ. အနီးအနားမှာ လုပ်စရာတွေ အများကြီး မရှိပါဘူး။, ထို့ကြောင့် Rakotzbrucke ခရီးစဉ်ကို Kromlau ပန်းခြံသို့ခရီးစဉ်နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။.
2. Champagne-Ardenne, ပြင်သစ်
စိမ်းလန်းစိုပြေသော ချိုင့်များနှင့် စပျစ်ခြံများနှင့် ဝိုင်ဖြူများ၏ အဆုံးမရှိ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း. ဒါကြောင့်, Champagne-Ardenne ကိုလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းသည် အီတလီသို့ သင်၏ခရီးအတွက် အံ့သြဖွယ်မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝိုင်ဒေသ, Tuscany. ရှန်ပိန်နိုင်ငံသည် ပါရီနှင့် လော်ရိန်းကြားတွင် တည်ရှိသည်။. ထိုကွောငျ့, တစ်ခုသောမှတ်တိုင် Champagne-Ardenne ရှိ စပျစ်ခြံကြီး အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ထပ်လောင်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်တယ်။ မိန်းကလေးများ’ ခရီးစဉ် ပဲရစ်.
ထို့အပြင်, ဇိမ်ခံ တောက်ပသော ရှန်ပိန်၏ အိမ်ဖြစ်သည်။, ဤဒေသသည် သမိုင်းဝင် အရေးပါလှပါသည်။. ဥပမာ, အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Joan of Arc သည် Domremy ရွာမှ ဆင်းသက်လာသည်။. ဒါကြောင့်, သာယာလှပသော ပြင်သစ်စပျစ်ခြံတစ်ခုတွင် ဝိုင်ကိုမြည်းစမ်းရင်း အံ့သြဖွယ်ပုံပြင်များကို သင်ကြားနိုင်ပေမည်။. အဓိကအချက်, Champagne-Ardenne သည် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။5ပြင်သစ်တွင် အံ့သြစရာအကောင်းဆုံး မှတ်တိုင်များ.
3. ဥရောပရှိ အံ့ဖွယ်မှတ်တိုင်များ: Oberhofen ရဲတိုက်, ဆွစ်ဇာလန်
ကမ်းပေါ်မှာ လှပသောရေကန် elastic, Oberhofen ရဲတိုက်သည် ဆွစ်ဇာလန်ရှိ ခမ်းနားသော ရဲတိုက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. Oberhofen ရဲတိုက်သည် Bern အကြားတွင်တည်ရှိသည်။, အင်တာလာကင်, နှင့် Lucerne ရေကန်. ဒါကြောင့်, Oberhofen ရဲတိုက်နှင့် Lake Thun သို့သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းသည် ရှည်လျားလှသောလမ်းရှိ အံ့ဖွယ်မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။.
ဖြည့်စွက်ကာ, 13 ရာစုမှစတင်ခဲ့သော ရဲတိုက်ပုံစံပြတိုက်တွင် ထူးခြားဆန်းပြားသောသစ်ပင်များကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် အံ့ဖွယ်ဥယျာဉ်တစ်ခုရှိသည်။, ပန်းပွင့်, နှင့် Alps ၏ရှုခင်းများ. ထို့ကြောင့်, ရက်ဝက်ခရီးကို Oberhofen သို့ တစ်နေကုန် ခရီးစဉ်အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။, တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် သာယာလှပသောရှုခင်းများကို ခံစားနိုင်ရန် အနီးနားရှိ လှပသောပန်းခြံ, လူအုပ်ကြီးသည် Lucerne သို့ အမြန်သွားနေစဉ်.
4. Vorarlberg, သြစတြီးယား
လှပသော Constance ရေကန်ကို အပေါ်စီးမှ မြင်နိုင်သည်။, Vorarlberg သည် ၎င်း၏ ခမ်းနားသော ရေကန်နှင့် တောင်တန်းရှုခင်းများကြောင့် ကျော်ကြားသည်။. သြစတြီးယားမြို့သည် Vorarlberg တောင်ခြေတွင်ရှိသည်။, ခမ်းနားသည်။ သဘာဝအရံ တောင်ကြီးများ၏, အစိမ်းရောင်လမ်းများ. သင်သည် Liechtenstein မှသြစတြီးယားသို့မဟုတ်ဂျာမနီသို့ခရီးသွားနေသလား, Vorarlberg သည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ရပ်တန့်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ရထားခရီးတွင် ဥရောပတစ်လွှား.
တောင်ပေါ်မနက်စာ, သို့မဟုတ် လူရှုပ်သောမြို့ရှေ့တွင် သာယာသော ပိတ်ရက်ဖြစ်သည်။, Vorarlberg အတွက် အချိန်ပေးသင့်တယ်။. ဒီမြို့က ခရီးသွားတွေကြားမှာ သိပ်မသိပါဘူး။, သို့သော်, Vorarlberg သည် Austrian ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဟင်းလျာများကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည့် နေရာဖြစ်သည်။. ထို့အပြင်, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ Austrian ရှုခင်းများဖြင့် ဝန်းရံထားပါမည်။, ကျေးရွာပေါင်း, နှင့် ရှုခင်းများ – အကောင်းဆုံး Austria ကမ်းလှမ်းမှု, ခရီးသွားနေရာများနှင့် ဝေးသည်။.
5. ဥရောပရှိ အံ့ဖွယ်မှတ်တိုင်များ: Freudenberg, ဂျာမနီ
စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော အလယ်ခေတ် Freudenberg မြို့သည် ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။, နှင့် ဥရောပ၏ အလှဆုံးမြို့များ. ဤနေရာတွင် အဓိကဆွဲဆောင်မှုမှာ 80 သို့မဟုတ် ပျဉ်ထောင်ကာ အဖြူရောင်အိမ်များ, အထူးသဖြင့် ဆောင်းရာသီမှာ ကြည့်ရတာ လှတယ်။. ထို့ကြောင့်, နှင်းတွေဖုံးနေတဲ့ Freudenberg ခရီးစဉ်တစ်ခုပါ။ မမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံကို, မင်းကို အချိန်နဲ့အမျှ ပြန်ပြီး ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တွေဆီ ခေါ်ဆောင်သွားမယ့်တစ်ခု.
ထို့အပြင်, Freudenberg သည် စိမ်းလန်းသော တောင်ကုန်းများကြားတွင် တည်ရှိပါသည်။, နှင့် 160 ကီလိုမီတာ တောင်တက်လမ်းကြောင်း ကြီးမားသောအမြင်များ. Westphalia ဧရိယာသည် အရာအားလုံးစိမ်းလန်းပြီး ပန်းပွင့်ချိန်တွင် နွေဦးရာသီတွင် ချစ်စရာကောင်းသည်။. အဆိုပါ6Berlin မှ နာရီရထား ခရီးစဉ်သည် ၎င်းအတွက် လုံးဝ ထိုက်တန်ပါသည်။, အများဆုံးတွေထဲက တစ်ခုကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ။ ချစ်စရာကောင်းသောမြို့ဟောင်းများ ဂျာမနီမှာ.
6. ဧရာမလမ်း, မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်
ကျော်ကျော်၏ အမြင်များ 40,000 Giant's Causeway ရှိ အပြာရောင်ပင်လယ်ထဲသို့ ဆင်းသက်လာသော ဆဋ္ဌဂံပုံ ဘေ့စ်ကော်လံများသည် လုံးဝကို သာယာလှပသည်. သဘာဝ အံ့ဖွယ်များ သည် နှစ်ပေါင်း သန်း ၆ဝဝ ကျော် သက်တမ်းရှိပြီ ဖြစ်သည်။, အစိမ်းရောင်မှတဆင့်ရောက်ရှိနိုင်သည်။, အနီေရာင်, အပြာရောင်လမ်းများ. သူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ပုံစံအတွက်, ဤကော်လံများသည် Giant's Causeway ကို ညာဘက်တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။7အခြားကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်များ.
ထိုကွောငျ့, ပြောဖို့ မလိုပါဘူး။, Giant's Causeway သည် ထိုလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ 10 အိုင်ယာလန်တွင် ပြုလုပ်ရန် အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံး မှတ်တိုင်များ. သင် Belfast သို့မဟုတ် Dublin မှခရီးသွားသည်ဖြစ်စေ, ဒါကိုလုပ်ဖို့ အချိန်ပေးပါ။ ကောင်းသောနေ့ခရီး မြောက်အိုင်ယာလန်တွင်. စိမ်းလန်းစိုပြေသော အိုင်ယာလန်ရှုခင်းများဖြင့် ဝန်းရံထားသည်။, ခြေရင်း၌ ပြာသောသမုဒ္ဒရာ၊, ဤမီးတောင်ကော်လံများတစ်လျှောက် ခြေလှမ်းတိုင်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံးနှင့် အထူးခြားဆုံးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် သင့်ခရီးကို ပိုမိုနီးကပ်စေမည်ဖြစ်သည်။.
7. ဥရောပရှိ အံ့ဖွယ်မှတ်တိုင်များ: ဇာမတ်, ဆွစ်ဇာလန်
အဲလ်ပ်တောင်တန်းကြီးသည် အလွန်ကျယ်ပြောသောကြောင့် သင်ရပ်တန့်ရန်ရွေးချယ်သည့်နေရာတိုင်းသည် သင့်အသက်ရှုကြပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။. သို့သျောလညျး, အံ့ဩဖွယ်ရာ မြင်ကွင်းများနှင့် မတူပါ။ ဆွစ်ဇာလန်အဲလ်ပ်တောင်တန်း Zermatt တွင်. Zermatt သည် ၎င်း၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော နှင်းလျှောစီးသော တောင်စောင်းများတွင် ရေပန်းစားသော်လည်း၊, နွေဦးနဲ့ နွေရာသီမှာ လှပါတယ်။.
Zermatt သည် နေအိမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥရောပရှိ အလှဆုံးတောင်တန်းများ, Matterhorn. ကြည့်ရတာ ခံ့ညားပြီး အလှမ်းဝေးနေချိန်မှာ, Zermatt ၏အလှသည် Basel နှင့်ဝေးသောရထားခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။, ဘန်, နှင့် ဂျနီဗာ. ဒါကြောင့်, သင်သည် တနင်္ဂနွေအားလပ်ရက်အတွက် သို့မဟုတ် ဆွစ်အဲလ်ပ်စ်ရှိ အမှတ်ရဖွယ်အားလပ်ရက်တစ်ခုသို့ သင်၏ခေတ္တရပ်နားမှုကို သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။.
8. Alberobello အီတလီ
ပုံမှန်မဟုတ်သော Trulli ကြောင့် သင့်ကို စွဲလန်းစေလိမ့်မည်။, အံ့မခန်း Salento ဒေသတွင်. အဖြူရောင်မျက်နှာစာများနှင့် အလှဆင်ထားသော အိမ်ခေါင်မိုးများသည် ကြေးခေတ်မှ စံနမူနာပြအိမ်များဖြစ်သည်။. ဤထူးခြားသော အဆောက်အဦများသည် ယာယီဟု ယူဆရသည်။, သို့သော် အများအပြားသည် အချိန်နှင့် ရာသီဥတုကို ရှင်သန်ခဲ့ကြသည်။, ချစ်စရာကောင်းသော Alberobello မြို့၌. Alberobello သည် အီတလီတောင်ပိုင်းရှိ ရှုခင်းသာဆုံးမြို့များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။, နှင့် အီတလီကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် ကြီးစွာသော မှတ်တိုင်တစ်ခု.
ဒီမြို့က သေးသေးလေး, ဒေသဆိုင်ရာရထားများဖြင့် Alberobello နှင့် Trulli ဇုန်သို့ အလွယ်တကူ သွားရောက်နိုင်သည်။. ဒီလမ်း, အခြား ချစ်စရာကောင်းသော မြို့များတွင် နောက်ထပ် ရပ်နားမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။, ရှေးခေတ် Lecce ကဲ့သို့ပင်, ပင်လယ်ကမ်းစပ်ဘာရီ, နှင့် Trani. ဖြည့်စွက်ကာ, ဤခမ်းနားသောမြို့များသည် အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ချွတ် -The- ရိုက်နှက် - လမ်းကြောင်းကို အီတလီတွင် ခရီးသွားဧည့်သည်များ ကင်းစင်သည်။.
9. ဥရောပရှိ အံ့ဖွယ်မှတ်တိုင်များ: Beaulieu-Sur-Mer ရွာ ပြင်သစ်
မိုနာကိုနဲ့ နိစ်ကြား, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် French Riviera တွင်, Beaulieu-sur-Mer သည် ပင်လယ်ကမ်းစပ်တွင် ရပ်တန့်ကာ မြေထဲပင်လယ်တွင် လန်းဆန်းစွာ နှစ်မြှုပ်ရန် ခုန်ချရန် ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်။. ကိုယ်ပိုင်ကမ်းခြေများ, ဇိမ်ခံအိမ်ကြီးများ၊, Saint-Jean-Cap-Ferrat ကျွန်းဆွယ်၏ ကြီးမားသော ရှုခင်းများ, ဥရောပမှာ ဒီထက်ပိုပြီး အိပ်မက်မက်စရာမရှိပါဘူး။.
Beaulieu-sur-Mer အပြင်, Les Corniches တစ်လျှောက် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် မှတ်တိုင်များစွာ ရှိသည်။, French Riviera တစ်လျှောက် ချောက်ကမ်းပါးလမ်းများ. 30 ကီလိုမီတာ မောင်းနှင်မှုသည် Nice တွင် စတင်ပြီး Menton တွင် အဆုံးသတ်သည်။, တစ်ခု ဥရောပရှိ အရောင်အသွေးအရှိဆုံးနေရာများ. ကီလိုမီတာ 30 သာရှိသော်လည်း၊, အနည်းဆုံးတော့ရှိတယ်။ 10 ဥရောပရှိ ဤရှုခင်းသာလမ်းတစ်လျှောက် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော မှတ်တိုင်များ.
10. Giethoorn, နယ်သာလန်
သက်ကယ် လယ်မြေများ နှင့် 170 ကျွန်းများ, Giethoorn သည် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ရွာ နယ်သာလန်နိုင်ငံ. ထို့အပြင်, တူးမြောင်းများတလျှောက်, သစ်သားတံတားတွေအောက်မှာ, စိမ်းလန်းသောမြေများနှင့် ပန်းပွင့်များဖြင့် ဝန်းရံထားသည်။, သင်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။.
ချစ်စရာကောင်းသော Giethoorn ရွာကလေး အမျိုးသားဥယျာဉ် Weerribben-Wieden သည် Holland ကိုဖြတ်၍ ခရီးသွားခြင်းအတွက် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။. ဤရွာလေးသည် 18 ရာစုတွင် အေးခဲနေသော်လည်း၊, ခေတ်မီသောကျေးဇူး အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ယခုထက်နည်းသောအားဖြင့် သင်သည် အမ်စတာဒမ်မှ Giethoorn သို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။2နာရီ.
ငါတို့မှာ တစ်ဦးကရထား Save သင်ဤခရီးများစီစဉ်ရန်ကူညီခြင်းအတွက် ၀ မ်းမြောက်လိမ့်မည် 10 ဥရောပရှိ အံ့ဖွယ်မှတ်တိုင်များ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 Amazing Stops in Europe” ကို သင့်ဆိုဒ်တွင် ထည့်သွင်းလိုပါသလား။? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Famazing-stops-europe%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
အံ့သြဖွယ်မှတ်တိုင်များ	အံ့ဩစရာရပ်တန့်	ရပ်တန့်	ဥရောပတွင်ရပ်တန့်	ခရီးသွားလာ